Ungaphuza utshwala noma uphuze imithi lapho uncelisa? - Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Umphakathi, Inkampani Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani, Izindaba Izidakamizwa Vs. Umngani Izindaba, Wellness Izilwane Ezifuywayo Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo, Izindaba Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Cindezela Umphakathi Umphakathi, Ukuphila Kahle
Main >> Imfundo Yezempilo >> Yini ngempela eyenza ibe ubisi lwakho lwebele?
Yini ngempela eyenza ibe ubisi lwakho lwebele?
Lokhu kuyingxenye yochungechunge lokuncelisa ibele ukweseka iNyanga Kazwelonke Yoncelisayo (Agasti). Thola ukumbozwa okuphelele lapha .
Omama abangabahlengikazi bayazi ukuthi yonke into oyifaka emzimbeni wakho inamandla okuthinta ingane yakho ngobisi lwakho lwebele. Ulwela ukudla okunomsoco kanye ne-hydration ukondla omncane wakho ukudla okuhle kakhulu.
Kepha kuthiwani ngezinto ongazidli ozisebenzisayo? Ngokuqondile, imithi kadokotela notshwala. Ngabe ziphephile ukuthi zingathathwa omama abahlengikazi? Zingakanani lezi zinto ezingena obisini lwakho? Sike sahlola nabanye ochwepheshe ukuthola.
Imithi kadokotela lapho uncelisa
Kuphephile yini ukuthatha imithi kadokotela imithi lapho uncelisa ? Impendulo elula imvamisa. Ngokuya nge- Umbiko wezokwelapha yi-American Academy of Pediatrics , imishanguzo eminingi nokugoma kuphephile ukuyisebenzisa ngesikhathi sokuncelisa futhi ngeke ilimaze ingane yakho.
Imithi eminingi ejwayelekile iphephile enganeni enempilo [uma iphuzwa ngumama oncelisayo], kusho uRachael Martin, umhlengikazi obhalisiwe eBowie, eMaryland. Uqhubeka athi odokotela abaningi, odokotela bezingane, kanye nosokhemisi abanalo ulwazi olwanele ngemithi nokuncelisa ibele, ngakho-ke kungcono ukukhuluma nomxhumanisi noma uthisha onakekela lokhu.
Futhi-ke, akuyona yonke imithi eyenziwe ilingana.
Imithi ihlukahluka kakhulu kuye ngohlobo lomuthi nokwakheka kwawo kwamakhemikhali, kusho uKelly Kendall, umhlengikazi obhalisiwe kanye nomeluleki we-lactation eCrofton, eMaryland.
Lokhu kusho ukuthi umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo kuzofanela alinganise izinzuzo nezingozi zemithi ngayinye ngaphambi kokuyinikeza omama abancelisayo. Ngokombiko we-AAP, ezinye izinto okufanele uzicabangele yilezi:
isidingo sikamama somuthi.
imiphumela engaba khona yomuthi ekukhiqizeni ubisi.
mangaki amabele anceliswa ingane ubisi lwebele ngosuku.
inani lomuthi likhishwe obisini lwebele.
izinga lokumunca ngomlomo ingane esancelisayo.
noma yimiphi imiphumela emibi engaba khona enganeni ebelethayo.
Ake sihlolisise lawo maphuzu amathathu okugcina ezinhlamvu. Ungazi kanjani ukuthi ungakanani umuthi okhishwe obisini lwebele, bese umunca ingane yakho? Futhi okubaluleke kakhulu, uzokwazi kanjani ukuthi umuthi ungalimaza ingane yakho?
Kuya ngemithi nokuthi ihlanganiswa kanjani futhi ichithwe kanjani, nokuthi iyini impilo yayo, kusho uMartin. Ukuphepha komuthi wokuncelisa ibele kucwaningwe kakhulu nguDkt Thomas Hale.
Incwadi kaDkt Hale, Imithi Nobisi Lomama , eyabhalwa ngokuhlanganyela noDkt. Hilary E. Rowe, i-Pharm.D., njengamanje ikumagazini wayo we-17. Kubhekwa njengesisetshenziswa sokuqala sekuphepha kwemithi ngenkathi uncelisa.
Ababhali babela isigaba sengozi ye-lactation (LRC) ezinhlobonhlobo zemithi besebenzisa izinto eziningi. Okokuqala, banquma ubuthi besidakamizwa jikelele. Ezinye izidakamizwa zinobuthi obuphansi, njengama-penicillin, ama-sulfas, nama-NSAID (njenge-ibuprofen). Kodwa ezinye zinobuthi obukhulu, njengezidakamizwa zomdlavuza nama-antimetabolite. Imvamisa, azikho izifundo ezilawulwayo ezitholakalayo zokuhlinzeka ngemininingwane yobisi lwebele kumuthi. Kulokhu, ababhali bathembele kwi-pharmacokinetics yezidakamizwa, efaka ukumuncwa kwayo ngomlomo, amazinga e-plasma, nengxenye yempilo. Besebenzisa lolu lwazi, ababhali benza isilinganiso esifundisiwe se-LRC yayo.
Ngeke sikwazi ukwehla zonke lezi zinto kuyo yonke imishanguzo kadokotela engabakhona kubhulogi elilodwa. Noma kunjalo, ungathola imininingwane mayelana nemithi ethile ku- Isikhungo Sengozi Yezinsana , omunye umsebenzi kaDkt Hale’s. Isikhungo sihlinzeka nge-hotline ongayishayela ngemibuzo mayelana nokuphepha kwemithi ngesikhathi sokuncelisa.
Uma kukhulunywa nge utshwala nokuncelisa , izimpendulo zehluke kancane. Omama bangakujabulela ukuphuza ngokulinganisela, kusho uKendall. Umthetho omuhle wesithupha uthi uma usangulukile ngokwanele ukushayela, ukahle ukuncelisa ibele.
Ochwepheshe abaningi, kufaka phakathi i- I-American Academy Yezingane kanye ne- Izikhungo Zokulawulwa Nokuvikelwa Kwezifo , batusa ukuthi omama abahlengikazi bangaphuzi iziphuzo ezidakayo ezingaphezu kwesisodwa kuya kwezimbili ngesonto (futhi bathi ukungaphuzi nakancane kuphephe kakhulu). Ubuhlengikazi kufanele buvele emahoreni amabili noma ngaphezulu ngemuva kokuphuza utshwala, ukunciphisa ukutholakala kwengane. Kepha ucwaningo ngale ndaba luyaphikisana.
Utshwala buhlanganiswa nobisi lwebele ngesilinganiso esifanayo negazi, kusho uMartin. Ngamanye amagama, uma okuqukethwe kwakho kotshwala egazini kungu-0.08% ngemuva kokuphuza izingilazi ezintathu zewayini, okuzokubeka ngaphezu komkhawulo osemthethweni wokushayela ezindaweni eziningi, khona-ke ubisi lwakho lwebele nalo luyi-0.08% yotshwala.
Ngezinhloso zokuqhathanisa, ngayinye yalezo zibuko zewayini mhlawumbe yayiyi-10-20% yotshwala. Ngakho-ke ubisi oluphuza ingane yakho lunotshwala obuncane kakhulu kunesiphuzo sakho. Eqinisweni, ngokusho kokubuyekezwa komtholampilo kumagazini I-Basic Clinical Pharmacology kanye ne-Toxicology , inani lotshwala obuphuzwa izingane ezincelisayo ngobisi lwebele lucishe lube u-5-6% wenani umama aliphuzayo. Ngisho nasesimweni semfundiso yokuziphuza ngokweqile, izingane ngeke zinikezwe utshwala obufanele ngokomtholampilo, ngokusho kocwaningo. Izingane ezisanda kuzalwa zigaya utshwala cishe cishe isigamu sesilinganiso sabantu abadala.
Ngokuphikisana nenkolelo evamile iminyaka eminingi, asikho isidingo sokumpompa nokulahla. Njengoba nje utshwala budlula obisini lwakho lwebele, nabo buyadlula phuma ngezinga elifanayo njengoba kwenzeka egazini lakho. Njengoba okuqukethwe kwakho kotshwala egazini kwehla, kanjalo nokuqukethwe utshwala obisini lwakho. Uma ucabanga ukuthi uphuze kakhulu ukuphuza ingane yakho, mane ulinde kancane (imvamisa amahora amabili kuya kwamathathu kufanele anele) ngenkathi usangulukile. Futhi ungalahli lelo golide eliwuketshezi!
Uma unemibuzo mayelana nokuphepha kotshwala noma imithi kadokotela lapho uncelisa, khuluma nomeluleki we-lactation, i-OB-GYN yakho, noma udokotela wezingane wengane yakho
ihlala isikhathi esingakanani i-50mg vyvanse
Izindawo ezinhle kakhulu zokuhlala inhliziyo enempilo
Yini iLevaquin futhi isetshenziselwani?
Izibalo zokuphazamiseka kokudla 2021
Ungamisa kanjani ukukhwehlela ebusuku ngemithi ye-OTC namakhambi asekhaya
IVascepa vs. Lovaza: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Phenylephrine vs. pseudoephedrine: Umehluko, ukufana, futhi okungcono kuwe
Ungakubuyisa kanjani ukunambitheka nephunga ngemuva kwe-coronavirus
ILexapro vs. Prozac: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
Ukusebenza nehhovisi lomhlengikazi esikoleni sengane yakho
Thola umuthi obandayo ongcono kakhulu osuselwa kuzimpawu zakho
Ungazivimbela kanjani izinkinga zesikhumba ezivame kakhulu ehlobo
Ucabanga ngemithi ye-ADHD? Umhlahlandlela wakho ekwelashweni kwe-ADHD yabantu abadala
okufanele ukwenze uma uhlolwe izidakamizwa ezingekho emthethweni
yikuphi kokulandelayo okunconywayo ekwelapheni i-hangover?
ungaya ekunakekelweni okuphuthumayo ngaphandle komshwalense
udinga ukushesha kangakanani ukuthatha uhlelo b
iphilisi lokulawula inzalo elihamba phambili ukumisa izikhathi
Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba
Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle